ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောဖို့ကောင်းတာက “အစိုးရလဲ ဝန်ခံပါ” | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Announcement of Burmese Muslim Youths to help treatment in Australia for the severly injured burnt Buddhist Monks
In Politics there is No Permanent Friends or Enemies, Only Permanent Interests. »
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောဖို့ကောင်းတာက “အစိုးရလဲ ဝန်ခံပါ”
Cho Tu Zal ပြောရေး ရှိလို့ ပြောပါရစေ
ပြောရရင် အပြစ်မတင်ရက်၊ တင်ရက် အဘဦးဝင်းတင်တို့၊ အဘဦးတင်ဦးတို့ NLD ကနဦးကတည်းက သူ့တယောက်ထဲ ထင်ရာစိုင်းလုပ်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ ဒီမိုကရေစီဆိပ်သုဉ်းပြီးတယောက်ထဲ သဘောနဲ့ စု သဘော လုပ်ခ
ွင့်ပေးခဲ့တဲ့၊ စီအီးစီလူကြီးတွေကိုပဲ တခါတလေမှာ အပြစ်တင်ချင်မိပါတယ်။ စကတည်းက နိုင်ငံရေးဆိုတာ တဦးထဲ တယောက်ထဲ သဘောနဲ့ လုပ်စရာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ဒေါ်စု ကို ထိန်းနိုင်၊ ကျောင်းနိုင်ခဲ့ရင် ကောင်းခဲ့မှာ။
ခု လက်ရှိ NLD စီအီးစီ အစည်းအဝေးပွဲတွေဟာ နိုင်ငံရေးပါတီတခုရဲ့ အစည်းအဝေး ပွဲတွေ နဲ့ကော တူပါရဲ့လား။
တပ်တွင်းက သတင်းအချက်အလက်တွေကို တင်ပြ၊ အထက်အရာရှိက ဆုံးဖြတ် အမိန့်ချမှတ်မှုမျိုးတွေနဲ့ ပို တူနေမလားပဲ။သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါင်းများစွာ မှားခဲ့တာ. . . ကျနော်တို့ မပြောရက် ပြောရက် ပြောရေး ရှိ ပြောရပါတော့မယ်။စင်ပြိုင်အစိုးရကိစ္စ၊
အာဇာနည်နေ့အရေးတွေမှာ တွေဝေခဲ့၊ မပြတ်သားခဲ့တာ၊
နောက်ဆုံး ဒီပဲယင်းမှာတောင် သူ့အမိန့်ကို မနာခံခဲ့တဲ့ ကားဒရိုင်ဘာကြောင့် လွတ်ခဲ့ရတာ။
ကျနော်တို့အားလုံး သိပ်မျှော်လင့်အားလွန်းကြီးခဲ့မိသလား လို့ ရင်နာနာနဲ့ တွေးမိတယ်။
သေချာတာဟာ ဒေါ်စုဟာ ကျနော်တို့ ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ သူ့ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လို နိုင်ငံရေးသမားမျိုးလုံးဝ မဟုတ်ခဲ့ဘူး။ ခုလက်ရှိ သူ့ဆုံးဖြတ်မှုတွေဟာ လက်ရှိ ပြည်သူတွေ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကို လုံးဝ ကိုယ်စားမပြုဘူး။
ဗိုလ်ချုပ်လို အခြေခံကျကျ နိုင်ငံရေး လုပ်ခဲ့ဖူးသူ မဟုတ်ဘူး။
ဗိုလ်ချုပ်လို ဆင်းရဲတဲ့ပြည်သူတွေကို စာနာစိတ်လည်း မရှိဘူး။
သူ့ဘ၀ တလျှောက်လုံး စာအုပ်တွေနဲ့ နေခဲ့ပြီး မြန်မာပြည်ရဲ့ တကယ့်နိုင်ငံရေးငရဲ ကို သူမကျခဲ့ဖူးပါဘူး။ သူပေးဆပ်ခဲ့တဲ့ အကျယ်ချုပ်နှစ်၂၀ ဟာ အင်လျားကန်စောင်းက တိုက်ကြီးထဲမှာ။ ဒါတွေကြောင့် သူ့အမြင်တွေဟာ
လက်တွေ့နဲ့ က င်းကွာ နေသလား လို့ ကျနော့် သံသယတွေ ၀င်နေမိတယ်။
တချိန်က ရဲရဲတောက်ခဲ့တဲ့ အန်တီစု ကို ကျနော်တို့ သိပ်ချစ်၊ သိပ်တန်ဖိုးထားခဲ့တယ်။ အဲဒီလို မှားတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ရှိတာတောင် အဲဒီ ရဲရဲတောက် တဲ့ လုပ်ရပ်တွေကြောင့် ခွင့်လွှတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ခုတော့ဗျာ. ..
Tags: Andrew, Andrew Bynum, History, Jackson Andrew, Johnson Andrew, Organizations, Presidents, United States
This entry was posted on December 14, 2012 at 7:54 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.